Saamiga qiimaha maal-gelinta shirkadaha oo aad kor ugu kacay 2013 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saamiga qiimaha maal-gelinta shirkadaha oo aad kor ugu kacay 2013
La daabacay torsdag 16 januari 2014 kl 11.34
Sicirka qiimaha ee suuqa maal-gelinta shirkadaha, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo "Börs-ka", oo shalay soo gabagabeeyay hoowl-sannadeedkiisii sannadkii tagay ee 2013 ayaa isku celcelin wuxuu kor u kacay 23%. Dhacdadaa ayaan ahayn mid lala yaabo taariikh ahaan, hase yeeshee uu kor u kaca sannadkani ka duwan yahay kuwii hore, sida uu sheegay Jan Dworsky, oo ka hol-gala mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee dalka waa Handelsbanken:
- Sannadaha caadiyan uu kor u kaco 20% sicirka qiimaha suuqa maal-gelinta shirkadaha ayey hor-seed ka ahaan jireen shirkadaha ka ganacsada dhirta, macaadiinta dhulka laga qodo iyo kuwa soo saara qalabka farsamada. Hase yeeshee sannadka middaa wuu ka duwan yahay oo waxaa kor u qaaday qiimaha saamiga shirkadaha bangiyada, sida uu sheegay Jan Dworsky.
Waxaa qaasatan aad kor ugu kacay sicirka qiimaha suuqa maal-gelinta shirkadaha xarunta magaalada Istockholm, isagoona gaarey heer aan horay u dhicin, waana mid u dhigma wixii ka horeeyay 2008, intii aan la gelin xaaladda dhaqaale-darro ee dalka iyo guud ahaan caalamka. Iyadoona ay dhacdadaa ku macneeysay Patricia Hedelius, oo ka howl-gasha war-geeyska Svenska Dagbladet dhacdo saan saan u noqon karta in laga sii baxeyo xaaladdii cakireeyd ee dhaqaale:
- Waxaa la oran karaa inay saansaan u tahay in laga sii baxeyo xaaladdii cakireeyd ee dhaqaale, middaasina oo bilaabatay 2007, 2008. Iyadoona intaa raacisay inuu falkaasi hor-seedo reeyn reeyn dhaqaale ee aanu noqon oo keliya kor u kac sicirka qiimaha suuqa maal-gelinta shirkadaha, sida ay sheegtay.
Dhanka kale waa xaalad aan sugneeyn inay saansaan wanaag-san u tahay kor u kac dhaqaalaha la soo gudboonaada, maadaama aaney bilaaban in shirkaduhu macaash ballaaran helaan, middaasina oo ku xiran hadba sida uu yahay jeebka bulshada iyo inta ay le'egtahay awoodda iibsiga macaamiisha. Waana xaalad ku sugan dheeli tir. Dhanka kale ma jirto cabsi laga qabo bangiyo la liicliicaya dhaqaale darro:
- Ma jiraan bangiyo ku sugan dhacaa kufid ee ka howl-gala nawaaxiyadeenna. Sidoo kale ma lihin shirkado ey heystaan dhaqaale darro. Marka waxaa la oran karaa inaannu ka soo baxeyno dhaqaalle-darradii, sida ay sheegtay Patricia Hedelius, oo ka howl-gasha war-geeyska Svenska Dagbladet.
Kor u kaca iyo hoos u dhaca sicirka qiimaha suuqa maal-gelinta shirkadaha ayaa ah mid inta badan la xiriira hab-fikir maskaxeedka bani'aadamka, hase yeeshee aan ahayn mid uu ku xiran yahay kor u kaca ama hoos u dhaca dhaqaale ee dal. Kolka uu sicirka kor u kaco waxaa la gaaraa heer la filo inuu hoos u soo dego, halka kolka uu hoos u socdana la filo inuu kor u kaco. Hase yeeshe kolka laga hadleyo mustaqbalka dheer waxaa kor u kaca dhaqaale aasa as u ah tiirarka dhaqaalaha ee dal leeyahay, sida uu sheegay Gösta Carlberg soo saaraha war-geeyska Aktiespararen.
Balse haba yaraatee aan la saadaalin karin sida ay xaaladani ku sii socon doonto. Is-bedel wuu dhici doonaa, lamase sheegi karo kolka uu dhici doono. Sida uu qabo caalinka Richard Wahlund oo ka howl-gala jaamicadda ganacsiga ee magaalada Istockholm.
Ilaha/ Ekot, P1 morgon kenadid.mohamed@sr.se